मनोबल बढाऔँ: कोरोना संक्रमणबाट आत्तिनु पर्दैन
On: २०७७ श्रावण ३२ गते, आईतवार, ०४:०३ बजे प्रकाशित
राकेश कुमार शर्मा।
नेपालमा काेराेना संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकाे छ। सञ्चारमाध्यमले काेराेनाबाट संक्रमित र मृत्यु भएका मानिसहरुकाे संख्या सुनाउँदै गर्दा धेरै मानिसहरु आफूलाई पनि काेराेना हुने हाे कि, काेराेना लागिहाल्याे भने मरिने पाे हाे कि भनेर चिन्तित भएकाे देखिन्छ। तर मृत्युदर बढ्दैमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आत्तिइहाल्नु पर्दैन।
मुटु, मिर्गाैला, टीबी, मधुमेह आदि जुनसुकै आदि जुनसुकै रोगले मृत्यु भए पनि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको भन्ने खालका कुराहरु आइरहेकाले मानिसहरुमा नकारात्मक असर परेकाे हाे।
मानिसहरुलाई अरु विभिन्न रोगहरुले चापेकाे हुन्छ तर कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था भएकाले ती बिरामीले अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरुबाट समयमा उपचार पाउँदैनन्। यस्ता कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।
के लकडाउन र निषेधाज्ञा लागू गरेर मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमणको समस्या समाधान हुन्छ? निषेधाज्ञा र लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सक्छ? भोकमरी लाग्यो भने जिम्मेवार को? यी र यस्तै प्रश्नहरुकाे जवाफ खाेज्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने देखिएकाे छ। यदि काेराेनाकाे याे कहर धेरै समय लम्बिएमा यसकाे समाधान लकडाउनमात्र नहुन सक्छ। त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन साेच राखेर जतिसक्दाे छिटाे पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कोरोना पनि रुघाखोकी जस्तै एक प्रकारको सरुवा रोग निम्त्याउने भाइरस हो। यसलाई छेकेर छेकिन्न तर सुरक्षाका उपाय अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गरे अरुबाट आफू र आफ्ना परिवारमा सर्नबाट जाेगिन/जाेगाउन सकिन्छ। यसका लागि स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने,साबुन पानीले हात धुने, सफा र इम्युनिटी बढाउने खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ ।
मान्छेहरु पहिले पनि मर्थे। देशभरमा दिनदिनै कालगति,अन्य राेग वा दुर्घटनाबाट दिनहुँ हज्जाराैंकाे ज्यान जान्थ्याे तर काेही मानिस अहिलेजस्ताे आत्तिँदैनथे। तर हामीले यति जनाको मृत्यु भयो भनेर थाहा पाउने गरेका थिएनौं। अहिले मृत्यु हुनेको संख्या थाहा पाइरहेका छौं, फरक यति मात्र हाे।
लकडाउन वा निषेधाज्ञाकाे माैका छाेपेर व्यापारीहरुले बजार भाउ बढाएका छन्। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेकाे छैन। अन्य कैयौं मुलुकहरुमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि नागरिकहरुलाई भत्ता दिएको छ, नागरिकहरुका लागि सरकारले नयाँ नयाँ योजना लागू गरेको छ ।
हाम्रो देशमा भने लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरु भाेकभाेकै बस्नुपरेकाे अवस्था छ। यस्ताे अवस्थामा सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्दै मनाेबल उच्च बनाएर जीवन बचाउनेतिर लाग्नु नै उत्तम देखिन्छ।
२०७७ श्रावण ३२ गते, आईतवार, ०४:०३ बजे प्रकाशित